Maitiro EkuDhawunirodha Photomath yePC Mahara (Dzazvino Shanduro) | Gadget nhau
Maitiro EkuDhawunirodha Photomath yePC Mahara (Dzazvino Shanduro)
Paco L Gutierrez | 08/02/2021 18:31 | Yakagadziridzwa ku 19/02/2021 18:42 | Android, General, Tutorials
PhotoMath yakave inozivikanwa chishandiso chedu nhare mbozha, nacho tinogona kugadzirisa chero dambudziko remasvomhu tichishandisa kamera yeedu terminal. Mugadziri wayo adaidza kunyorera kunzi kamera yekutanga, asi chishandiso chakakosha kwazvo kudzidzisa kumba, nekuti zvinogona kubatsira zvakanyanya kuvabereki vanoda kubatsira vana vavo kuita homuweki yavo. Neichi chishandiso isu tinongotora pikicha yeiyo equation uye inotipa isu mhedzisiro, pamwe nemirairo yekuzviita nhanho nhanho.
Asi, Ichi chishandiso chinogona kushandiswa pakombuta yedu here? Ehe, kunyangwe izvi tichifanira kushandisa Android emulatorHaisi dambudziko asi zvinogona kusanzwisisika kune vamwe uye zvimwe zvinonetsa. Inonyanya kubatsira kune avo vasingade kuve nharembozha padhuze pavanenge vachidzidza kana kushanda. Pasina kupokana, mudzidzi wese kana mubereki anozofarira kuve nechokushandisa pazvinhu zvakawanda sezvinobvira. Muchikamu chino tiri kuzokuratidza maitiro ekurodha pasi PhotoMath paPC yako yemahara mune yayo yazvino vhezheni.
1 1. Dhawunirodha Android Emulator yePC
2 Isa Android emulator pane yedu PC kana macOS.
3 3. Dhawunirodha Photomath
4 Inonakidza Android Mapurogiramu Ekutevedzera paPC
1. Dhawunirodha Android Emulator yePC
Ichi chishandiso chiripo kuApple saka isu tichafanirwa kutevedzera Android kubva kuPC yedu, nekuti kune zvakawanda zvirongwa, asi isu tichazokurudzira imwe kunyanya, iri Bluestacks. Ndizvo pasina mubvunzo inonyanya kufarirwa chirongwa chekuteedzera Android, asi zvakare chinonyanya kushanda uye chinoshanda. Pamusoro pekuve anonyanya kushandirwa, kuiisa ine mukana wekuti kana tiine dambudziko, tichava nezviuru zvemhinduro kamwe chete pawebhu.
Dhawunirodha Bluestacks pane iyi link yePC kana MAC.
Iwe unogona kutarisa uku kuunganidzwa kwe Android emulators iyo yatakatogadzira kare pawebhu, mune iyi link kana uine macOS, kana mune imwe iyi kana uine Windows PC.
Isa Android emulator pane yedu PC kana macOS.
Kuisa iyo Bluestacks emulator iri nyore kwazvo, isu tinongofanirwa kuwana yayo yepamutemo webhusaiti uye tanga kurodha pasiTichaiwana mune yekuodhaodha folda yemidziyo yedu. Kana kurodha pasi kwapera zvachose, isu tichaisa iyo yekumisikidza faira uye nekuipedza tichiteedzera zvese mirairo, chenjera kuti usaise zvinowedzerwa zvebrowser kana kubvuma chero mhando yekushambadzira yeemail edu.
3. Dhawunirodha Photomath
Kuve neiyo emulator yakaiswa zvizere pakombuta yedu, isu tinongofanirwa kuimhanya uye tsvaga iyo yekutsvaga bar, mairi tichanyora PhotoMath uye sarudza iyo. Kuwanika kwechitoro chekushandisa cheGoogle kuchavhurwa uye kucharatidzwa kwatiri muBluestacks. Tichafanirwa kudzvanya bhatani rekuisa sezvataizoita pane chero nharembozha yeApple.
Kana kumisikidza kwapera, isu tichawana icon yayo mune yedu Dhirowa rezvishandiso zvakaiswa, kana tisingakwanise kuzviwana, tichazviwana tichishandisa enjini yekutsvaga. Ramba uchifunga kuti iko kunyorera kunogadzirirwa nhare mbozha saka inogona kunge iine zvimwe zvikanganiso kuishandisa mukombuta emulator.
Izvi zvinoratidza zviri zviviri zvemakomputa ane Windows anoshanda system uye emakomputa ane macOS anoshanda system.
Inonakidza Android Mapurogiramu Ekutevedzera paPC
Pane zvakawanda zvinonakidza zvinoshandiswa kana mitambo yatisingakwanise kuwana pakombuta yedu, asi kuti tinogona kutevedzera pasina matambudziko neBluestacks, tichaenda kutumidza mamwe eanonakidza kwazvo.
Inonakidza foto mhariri iyo ichaita edu mapikicha ekare kutaridzika kunge eazvino akatorwa nemakamera emazuva ano, iko kunyorera kune basa chairo rekuchenesa edu asina kujeka kana mapikicha emifananidzo izvo zvatinochengeta kubva apo nhare dzaisave izvo zvavari izvozvi.
Mhedzisiro yacho inoshamisa, Kunyangwe ivo vasingazotaridzika semifananidzo yakanakisa yatinotora nhasi, ivo vachapa yakajairwa kumeso kune ese iwo mafoto atisingade kurasikirwa nawo asi kana kuratidza. Kana isu tine hombe gallery yemifananidzo yakare iyo yatave tichitsvaga kwenguva yakareba kuti tigadzirise, uyu ndiwo mukana wedu uye chakanakisa kupfuura zvese ndechekuti haina mahara zvachose kuApple saka isu tinongofanirwa kuiisa uye kudzoreredza vese avo mapikicha rimwe nerimwe uye chengeta makopi akagadziridzwa mufaira.
Kunyangwe paine webhu vhezheni yeWhatsApp ine mabasa mazhinji, inogara ichienderana neyedu terminal uye haina mabasa ese atinofarira pamafoni edu, ine yayo Android vhezheni yeemulator, isu tichafadzwa nesarudzo yakasununguka yeWhatsApp iyo yatinogona kushamwaridzana nenhamba yefoni uye nekufona vhidhiyo nemabasa ayo akazara pasina dambudziko.
Ichi chishandiso chakakurumbira kumanikidza kuburikidza edu epamoyo maforamu, kuvaita kuti vese vabatanidzwe pamwe chete neayo yakazvimirira meseji mameseji, ndeimwe yeaya maficha atinogona kunakidzwa neiyo Android emulator. Kunze kwekutevera maforamu edu aunofarira, iyo inotibvumidzawo isu kuisa mapikicha uye kuve nechenjedzo yeavo vese ipapo nekukasira notices.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Maitiro EkuDhawunirodha Photomath yePC Mahara (Dzazvino Shanduro)
USB uye microSD ndangariro dzese dzinoshandisa Kioxia [KUDZIDZISA]
Zvipo zvakanakisa zvetekiniki Valentine